DURYARD တွင်နေထိုင်ရန်မလွယ်ကူပါ - သတင်း
ပိုမိုလတ်ဆတ်သောဖြစ်ခြင်းသည်တောက်ပသည်။ အဆက်မပြတ်ထွက်ခြင်း၊ မျက်နှာအသစ်များနှင့်နေ့တိုင်းတွေ့ဆုံခြင်း၊ သင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအမြဲတမ်းအရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာတည်ရှိသည်။ အကယ်၍ ညဥ့်နက်သည် Exeter တွင်မကောင်းမွန်သော်သင်အလုံအလောက်သောက်လျှင်၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်။
Tom Angus Thong နှင့်ပြီးပြည့်စုံသော snogging
Duryard နှင့်ပြtheနာကြီးသည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ အရမ်းဝေးတယ် ကျွန်တော့်မိဘများကပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလကကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ခွာပြီးအမေကပြောခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်ထိုတွင်မရှိကြောင်းသင်မှတ်မိနေသေးသလား။ Streatham ဟေးလ်တက်အမူအရာ။
အဘယ်သူမျှမကအဲဒီမှာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ Birks သို့သွားသောလမ်းကိုဆက်လျှောက်သွားရင်းဒီမှာကော။ အဘယ်သူမျှမကဘယ်လောက်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ရှည်လျားသောလမ်းကပုံရသည်။
သံမဏိခြံစည်းရိုးကိုဖြတ်လျှောက်ပြီးလမ်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါမြင်တဲ့ကျောင်းသားနေအိမ်မှာကျွန်တော့်နှလုံးသားနစ်မြုပ်သွားတယ်။ ကံကောင်းတာကငါထင် Moberly တှငျနထေိုငျမခံခဲ့ရပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်၊ အပြင်ဘက်မှာအနည်းဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့်လာမယ့်နှစ်အတွက်လူမှုရေးဆိုက်ဘေးရီးယားကိုကျွန်မသွားမယ်ဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။
Duryard တွင်ကြိုတင်သောက်ခြင်းသည်အချည်းနှီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Timepiece သို့နှစ်မိုင်လမ်းလျှောက်ခြင်းကအရက်မူးနေသောစိတ်ကိုပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပြီး၊ အခြားခန်းမများမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကသင့်အားထိုတောင်တက်ရန်အထူးသဖြင့်စိတ်မ ၀ င်စားပါက၊ ဒါဟာအကွာအဝေးမသာ - နေရာတိုင်းကုန်းမြင့်ပေါ်တွင်ရှိနေသော်လည်း, နေရာတိုင်းကဒီမှာကုန်းတက်ပုံရသည်။ စက်ဘီးစီး '' အိပ်မက်တွေသေဆုံးလာရာအရပ်ပါပဲ။
ဒါ့အပြင်သင်ပြန်လာတဲ့ခရီးဟာထပ်တူထပ်မျှပြproblemနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်သင်ဟာ Cheesy's ရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆေးကြောပြီးနောက်သင့်ဘဝရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြန်ယူဆောင်လာဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်။ ကျွန်တော့်အဖော်ဖြစ်သူကအပြောင်းအလဲအတွက်တိုက်ခန်းပတ်ပတ်လည်ကိုလာပြီး Lafrowda ကိုအငှားယာဉ်စီးပြီးအထူးစိတ်အားထက်သန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါသူတို့အဆုံး၌အရှုံးမပေးထင်ပါတယ်။
သူသည်သူနေထိုင်ရာနေရာ၏မယုံနိုင်ဖွယ်နေရာကြောင့်သဘောတူညီချက်ကိုတံဆိပ်ခတ်။ မရသောကြောင့်မျက်နှာကျက်နှင့်နံရံများအားပေါင် ၅၀ တန်ဖိုးရှိပျက်စီးမှုကိုအဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။ သူ၏တစ်ညအိပ်မက်သည်အမှန်တကယ်နေရာဖြစ်သည့် Point Exe မှဖြစ်သည်။
Duryard သည်အခြေခံအားဖြင့် Birks ၏ဂြိုဟ်တုပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြောဆိုရန်အခြေခံအဆောက်အ ဦ များမရှိခြင်း၊ စက်ဘီးတဲများသို့မဟုတ်စာတိုက်ကဲ့သို့အခြေခံအသုံးအဆောင်များမရှိပါ။ သို့သော်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအပြစ်မဲ့စက်ဘီးအမြောက်အများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ညံ့ဖျင်းသောတံဆိပ်ကပ်ထားသောပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆောက်အအုံရှိသေးသည်။ ၁၁ ခုနောက်ပိုင်းတွင်စကားပြောရန်တစ်ခုတည်းသောလူမှုရေးနယ်ပယ်မှာပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သောပြောင်မြောက်မှုများသည်သူ၏ shit ဂီတကိုနေ့ရောညပါကစားရန်အမြဲတမ်းရှိနေသည် ကြားရန်လူတိုင်း။
သို့သော်အားလုံးမကောင်းပါ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ ဦး ရေထူထပ်စွာရှိပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လူတန်းစားအမျိုးမျိုးမှလူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်နိူင်သည်။ သင်က Cheltenham သို့မဟုတ် Guildford မှဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆသဖြင့်၎င်းသည်လန်းဆန်းစေသောအသစ်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်ရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကျောင်းသားများမရသည့်သူတို့၏ရောင်စုံနံရံများကိုမြင်ရလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤအရကြဘူး? အလွန် jell
ဒါဟာဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ Birks သို့မဟုတ် Lafrowda ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ လမ်းအောက်ခြေတွင်ကားဂိုဒေါင်တစ်ခုနှင့်မြေအောက်ရထားလည်းရှိသည်။ ထိုနေရာတွင်သင်၏ကျောင်းသားချေးငွေဖြင့်ခြေလျင်လျှောက်သောအီတလီ BMT နှင့်စျေးနှုန်းအလွန်ကြီးသောဗင်းနို့ပုလင်းဖြင့်သင်ထွန်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောပါရစေ။ အချိုးအစားမမျှတတဲ့ခိုင်မာတဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့ညံ့ဖျင်းတဲ့ဟောပြောပွဲတက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင် Duryard ကိုမရွေးသင့်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ကိုသနားမထားပါနဲ့, ငါတို့မသိ, မှတဆင့်ကံမကောင်းမှတဆင့်ဤနေရာတွင်ဖြစ်ကြသည်။ မြေပုံများကိုရှာရန်မခဲယဉ်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်းပျင်းရိလွန်းနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်စမ်းသပ်မှုများကိုစဉ်းစားရန်မထင်မှတ်သောပုံရသည်။